नेपालको अहित गर्न खोज्ने टटुटुहरुलाई जिल्ला र सीमाङकन चाहियो: ओली-NepalKanoon.com
नेपालको अहित गर्न खोज्ने टटुटुहरुलाई जिल्ला र सीमाङकन चाहियो: ओली
उदयपुर : अहिले विभिन्न हल्ला चलिरहेका छन्, सरकार परिवर्तनका लागि तीन दलीय सहमति भनेर संविधान संशोधनका कुरा चलिरहेका छन् । अन्त कतै घुँडा टेकेर, अन्त कतै कबुलियतनामा गरेर बिभिन्न सम्झौताहरु भएका छन् । ती सम्झौता कार्यन्वयन गर्न सम्झौता गराउनेहरुले दवाव दिएका छन् । दवावमा झुकेर दवावमा लतारिएर त्यस्ता सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रयास भइरहेका छन् ।
कल्लाइ चाहियो नेपालका जिल्ला जिल्ला ? कल्लाई चाहियो नेपालको सीमाङकन ? त्यो कसलाई चाहिएको ? नेपालको अहित गर्न खोज्नेका टटुटुहरुलाई चाहिएको हो नेपाली जनतालाई होइन । नेपालको अहितमा हुनेगरी नेपालको विकासमा ब्यवधान पुग्नेगरी, नेपाली जनताको मन दुख्नेगरी, नेपालको हितमा ठेस लाग्नेगरी नेकपा एमालेले कुनै सिमाना तलमाथि हुन दिंदैन । गलत ढंगले संविधान संशोधन गर्न एमालेले दिंदैन ।
सर्बसाधारणलाई म ढुक्क रहन अनुरोध गर्छु, के गर्छ एमालेले भनेर हामीसँग सोधिरहनु पर्दैन । के गर्छ एमालेले देशलाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ, गाउँ गाउँलाई थाहा छ । देशको एकता, विकास र हितको पक्षमा एमाले उभिन्छ । कुनै शक्तिका अगाडि खुट्टा कमाउने, टाउको निहुराउने एमालेले गर्दैन । देशको हित बिरुद्ध कुनै काम हुन सक्दैन । देशको बिरुद्ध षडयन्त्र गर्ने गरिरहुन तर, नेपाली जनताले आफ्नो भाग्य र भविश्यको फैसला गर्ने काम आफैं गर्ने बताए ।